मिडियाले धनीका अपराध दबाउँछन्, गरीबका अपराध उचाल्छन्: कार्ल मार्क्स — KhabarTweet
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १७, २०७६ समय: ८:२३:३६
कार्ल मार्क्स विश्वविख्यात चिन्तक तथा दार्शनिक हुन्। उनले समकालीन समाजलाई टाउकाले टेकेको समाजको संज्ञा दिए। समाजमा एउटा सशक्त ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ उनकै विचारबाट प्रेरित भएको मानिन्छ। कार्ल मार्क्स एक असल चिन्तक मात्र थिएनन्, एक सामाजिक चिन्तक र भावुक स्वाभावका व्यक्ति पनि थिए। संसारको भलाइमा उनका विचारहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको मानिन्छ।
बालबालिकालाई पढाउनुपर्छ – केही मानिसहरूले यो कुरालाई एउटा भनाइका रूपमा मात्र लिन सक्छन्। तर सन् १८४८ मा कम्युनिष्ट घोषणापत्र लेखिरहेका बेला माक्र्सले बालश्रमको चर्चा गरेका थिए।अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सन् २०१६ को तथ्याङ्क अनुसार अहिले पनि संसारमा १० मध्ये एक बच्चा बालश्रमिक छन्। धेरै बालबालिकाहरू कलकारखाना छाडेर विद्यालय जानुमा मार्क्सको ठूलो देन छ।
आफ्नो जिन्दगीको मालिक आफैँ हुनुपर्छ – के तपाई हप्ताको सात दिन काम गर्नुहुन्छ ? कामका बेला खाजा–खाना खाने समय लिनुहुन्छ ? एउटा निश्चित उमेरपछि तपाई सेवा निवृत्त हुन र निवृत्तिभरण पाउन चाहनुहुन्छ ? यदि तपाईको जवाफ सकारात्मक छ भने तपाई मार्क्सलाई धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ।लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सका प्राध्यापक माइक साभेज भन्छन्, ‘पहिला पहिला लामो समयसम्म काम गर्न भनिन्थ्यो। तपाईको समय तपाईको हुँदैन थियो र तपाई आफ्नो जिन्दगीका लागि सोच्न पाउनु हुँदैन थियो।’
मार्क्स चाहन्थे मान्छेको जिन्दगीमाथि उसकै अधिकार होओस्, मान्छेको जीवन अरू कुराभन्दा सर्वोपरी होओस्। उनी चाहन्थे मान्छेहरू स्वतन्त्र होऊन् र मान्छेभित्रको सिर्जनात्मक क्षमताको विकास होओस्।साभेज भन्छन्, ‘वास्तवमा मार्क्स भन्छन् हामीले हाम्रो जीवन यसरी जिउनुपर्छ कि जसको मूल्याङ्कन कामले नगरियोस्। एउटा यस्तो जीवन जसको मालिक हामी आफैँ होऊँ, जहाँ हामी आफैँले यो कुराको निर्धारण गर्न सकौँ कि हामी कसरी जिउन चाहन्छौँ। आजकाल यही सोचका साथ मानिसहरू जिउन चाहन्छन्न्।’
रूचि अनुसारको काम गर्न पाउनुपर्छ – आफ्नो मनले भनेको काम गर्दा मान्छेलाई खुशी मिल्छ। तर आफूले चाहे बमोजिमको काम नहुँदा मान्छेले दत्तचित्त भएर गर्न सक्दैन र ऊ निराश हुन्छ। यी कुराहरू अरूले नभई स्वयं माक्र्सले भनेका हुन्।
भेदभावको विरोध गर्नुपर्छ – यदि समाजमा कोही खराब छ, यदि तपाईँलाई लागेको छ कि कसैप्रति अन्याय, भेदभाव वा गलत भइरहेको छ भने तपाई त्यसको विरोध गर्नुस्। तपाई संगठित भएर विरोध गर्नुस् र परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्नुस्। संगठित विरोधका कारण कैयौँ देशको दिशा बदलिएको छ।
‘महिलालाई मतदानको अधिकार कसरी प्राप्त भयो ? यो अधिकार संसद्का कारण नभइ महिलाहरू संगठित भएर विरोधमा उत्रिएकाले पाए। काम गर्नेहरूले साप्ताहिक बिदा कसरी पाएरु मजदुरहरू संगठित भएर हड्तालमा उत्रिएकाले पाए।’
सञ्चार माध्यममाथि निगरानी राख्नुपर्छ – सरकार र ठूला व्यापारिक घरानाले साठगाँठ गरे तपाईलाई कस्तो लाग्ला ? व्यापारिक प्रतिष्ठानले तपाईका सबै जानकारी सरकारलाई उपलब्ध गराइदिए के तपाई आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ ? १९ औँ शताब्दीमै मार्क्सले यस्तो महसुस गरेका थिए।
मार्क्सले त्यतिबेला प्रकाशित हुने गरेका लेखहरूको अध्ययन गर्दथे। उनी यो निष्कर्षमा पुगेका थिए कि गरीबहरूले गर्ने अपराधलाई सञ्चार माध्यमले ठूलो स्थान दिन्छन्, जबकि नेताहरूले गर्ने अपराधको घटनालाई दबाउँछन्।’ (बिबिसी नेपाली सेवाबाट)
राजनीतिलाई सामान्यतया चेस खेलसँग तुलना गरिन्छ । विपक्षीका चालहरुको पूर्वानुमान गर्दै ‘स्टेपबाइ स्टेप’ रणनीतिक कदम चाल्नस...
त्यो भनेको के हो ? त्यसलाई ईंग्लिसमा के भन्छन् ? आफ्नो नेपाली साहै्र ‘वीक’ छ । नेपाली फिल्म हलमा गएर हेरेकै छैन । नेपाली...
अहिले महाव्याधिको आतंक फैलाउने नोबेल कोरोनाभाइरस के हो रु यसका बारेमा सही र सत्यतथ्य जानकारी अझै वैज्ञानिकहरुले थाहा पाइ...
शिक्षाका ज्योति, पूर्वी दर्शनका ज्ञाता तथा अष्टाङ्गयोग साधक श्री १०८ आवाल ब्रह्मचारी षडानन्द बालागुरुको जन्म जयन्ती विवा...